Iimfihlo zeengxowa zokuthambisa zamantombazana- Iindaba -I-Dongguan Yihua Handbag Co, Ltd
Ikhaya > Iindaba > Iindaba Zoshishino > Iimfihlo zeengxowa zokuthambisa zamantombazana
Ngapha koko, awudingi kuzisa izinto ezininzi kangaka kuhambo lweshishini ~ Amantombazana ahlala ebeka iingqondo zabo ukugcina indawo yeebhegi zabo zokuthambisa. Ixesha elingaphezulu, baya kuba nezi ngcebiso ~
Elula iza kuqala
La mava afuna ukuba amantombazana asuse izinto ezinokususwa ngaphandle kokuthandabuza ngelixa ligcina ukhathalelo olusisiseko lolusu kunye neziphumo eziphambili zokwenza izithambiso. njenge:
Iimveliso zokhathalelo lolusu
Eyona nto iyimfuneko: isicoci, itawuli yobuso, into yokuthambisa, ubume, i-ampoule, imaski yobuso
Yongeza ngokufanelekileyo: ubuso bukhrim, iimveliso ezimhlophe, ukhilimu wesandla, into yokuthambisa umzimba, ukhilimu wamehlo, ukukhupha, ukukhuhla ...
Eyona nto iyimfuneko: i-sunscreen, i-remover ye-makeup, umqamelo kunye nesiseko se-liquid, i-lipstick, ipensile ye-eyebrow, i-eye shadow, i-cotton pad
Ewe, iintlobo ezizodwa zolusu ezinje ngesikhumba esibuthathaka kunye nolusu oluhamba ngamabala kufuneka longezwe Isampulu, impahla yokuhamba
Xa uthenga iimveliso zokhathalelo lolusu, wonke umntu kufanele ukuba ugcine iisampulu ezininzi, eziluncedo kakhulu xa uhamba ngeshishini! Ewe zikhona iziqholo ezisetyenziswa ngamantombazana amaninzi! Ibhotile encinci kulula ukuyiphatha kwaye uyisebenzise kwakhona nanini na.
Kuthekani ukuba azikho iidemo ezininzi? Iikiti zokuhamba nazo lukhetho oluhle kakhulu! Ngamanye amaxesha sifuna ukuzama iimveliso ezinexabiso eliphezulu kuhlobo oluthile lobunewunewu, kwaye sikwacebisa ukuba uthenge impahla yokuhamba, kwaye akukabi kudala ukuqala emva kokujonga amehlo akho ~
Inyathelo elilandelayo kukufunda indlela yokupakisha, ugalele iibhotile ezinkulu zokususa izithambiso, into yokuthambisa amanzi, njl.njl. Ekhaya kwiibhotile ezahluliweyo uzikhuphe. Umbane awufanele udlule kwi-100ml, efanelekileyo kwaye ekhawulezayo ukudlula uhlolo lokhuseleko.
Inye into enokusetyenziswa okuninzi
Ukuba ufuna ukunceda unciphise ibhegi yakho yezithambiso, kuya kufuneka usebenzise amaqhinga angapheliyo! Umzekelo, sebenzisa imaski yobuso endaweni yokuthambisa, umqamelo ukuze ufumane isilungiso sokuthambisa kunye nesiseko esingamanzi, imilebe kunye nesidlele esisebenzisa kabini isithunzi samehlo, umgubo wamashiya wokuzenzela iliso nokulungisa ... Ngokwezidingo zakho zokwenza izinto, sebenzisa iimveliso esele zikhona ukwenza indibaniselwano ezininzi, kuya kubakho Okumangalisayo ~
Zama ukungazisi iidiski ezikhululekileyo
Kusafuneka ukhumbuze amantombazana angakhathaliyo: Uthathela ingqalelo ingxaki yamaqhuma, zama ukungazisi iidiski zomgubo oethe-ethe ngakumbi! Umzekelo, ukhilimu wamehlo angathatha indawo yokusasazeka kwamehlo, ukunciphisa ilahleko engeyomfuneko.
Emva kokuthetha ngezi ngcebiso, ewe, ndiza kutyala ingxowa yezithambiso kunye nebhegi yokhathalelo lolusu kumntu wonke!
Xa sihamba, sihlala sitywina kwaye sivula iingxowa ezintathu zezinto ekufuneka sizizisile: ibhegi yezithambiso, ibhegi yokhathalelo lolusu kunye nebhegi yokuhlamba. Iimveliso zicwangciswe ngokwamacandelo ahlukeneyo, ke kulula ukusebenzisa. Ukuthetha ngeengxowa zokuthambisa, ibhegi yethu yezithambiso zokuthambisa yeyokuqala ukucetyiswa, eneenzuzo ezimbini eziphambili!
Ukugcinwa kwamacandelo amaninzi
Isikhwama sokuthambisa esisebenzayo, esinesahlulelo esomeleleyo kunye nokulula ukuphatha isitayile, ubungakanani obulinganiselweyo, kwaye ngamanye amaxesha ukubeka phantsi ibrashi, inkuku eqhotsiweyo iyasebenza!
Igridi enkulu yomthamo
Le ngxowa yokugcina emile okomzimba yeyona ilungileyo, kwaye ilunge kakhulu njengengxowa yokuqokelela yokwenza iimveliso zokukhathalela ulusu.
Edlulileyo:Ukudibana okuncinci kukufundisa ukugcina iingxowa ukugcina indawo
Okulandelayo:Abasetyhini bakhetha njani iibhegi?